90 ° fahatezerana fanomezana toerana
Angular mety tsara
Vilia fisaka tsara
U mamolavola tsara
Wind mety tsara
Z endrika fanomezana toerana
base del pal
Haiyan Hama Hardware Co., Ltd. (HMSTRUT) Niorina tamin'ny 2002, izay hita ao amin'ny Haiyan County ---- afovoan'i Yangtze River Delta. Isika nandrakotra ny faritra 27000 metatra toradroa, izahay efa maherin'ny 200 ankehitriny mpiasa, anisan'izany ny 16 injeniera, 46 mpitantana. Koa dia nametraka ny Amerika Avaratra Service Center any Kanada.
HMSTRUT dia matihanina mpanamboatra sy ny mpanondrana izay voakasika ny fikarohana, famokarana sy ny fampandrosoana ny fametrahana rafitra. Ny tena vokatra dia: fantsona-bazana, fantsona, fantsona mety, sodina clamps, fastener sy ny sisa.
HMSTRUT dia manaraka ny politika ny fahambonian'ny mpanjifa, ny toetra-voalohany sy ny fiarovana ao amin'ny kilasy ambony-tanjona, fampandrosoana sy ny fanitarana ny vokatra vaovao saha vaovao. Ny tsara-ampy fitaovana tsara kalitao trano sy ny fanaraha-maso manerana ny famokarana rehetra dingana manampy antsika mba hiantoka totao mpanjifa fahafaham-po. Ankoatra izany, dia efa nandray ISO9001, ISO14001, ISO18001, tamin'ny taona sy Ul.
HMSTRUT mandray "mandry fahizay, fanaovana ny marina, fahombiazana, fanoloran-tena, zava-baovao, Win-Win" toy ny orinasa soatoavina. Izao dia be dia be ny vokatra sarobidy isan-karazany manerana izao tontolo izao hafa, toa an'i Eoropa, Amerika ary Japon.
Mikendry ny ho mpitarika ny orinasa amin'ny fametrahana rafitra.
No.388 North Zhenzhong Road, Shendang Town, Haiyan City, faritanin'i Zhejiang, Sina 314311
© Copyright - 2010-2022: All Rights Reserved. Soso-kevitra - Hot Products - Sitemap - DIEM Mobile
General mety tsara , Channel mety tsara , Angular mety tsara , Channel-bazana, Strut Channel Nut With Spring, Fantsona T Plate mety tsara,